Safidio ny fomba fahitana fahitalavitra
Buying Guides TV sy Home Theater
Ahoana ny fisafidianana ny DVR izay mety aminao
Ny fisafidianana ny fomba mety hananganana, ary ny fijerena ny fandaharana amin'ny fahitalavitra no tsy mora foana. Maro ny safidy eny an-tsena ary ny safidinao dia hidina amin'ny toe-javatra maro, anisan'izany ny vidiny, ny fampiasana entana sy ny orinasa izay manome ny famandrihana anao.
Izany dia milaza fa misy fomba maro ahafahana misafidy fomba fisafidianana TV ary azo zaraina amin'ny sokajy telo izy ireo:
Ny fomba fiasa tsirairay dia manana fiheverana sy fiheverana izay hanampy amin'ny famaritana ny safidy tsara indrindra ho anao sy ny fianakavianao.
Io dia mora ny fomba mahazatra indrindra no misafidy ny olona rehefa mividy na manofa mpamoaka horonan-tsary . Ny ankamaroany, raha tsy ny rehetra, ny orinasan-tserasera lehibe sy sata dia manome boka napetraka ahafahana mandoa vola amin'izy ireo, isam-bolana isam-bolana afaka miovaova isaky ny $ 8 ka hatramin'ny $ 16 isam-bolana. Manana safidy hividy ny kitaponao manokana ianao.
Ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra amin'ny fananganana ny boaty fantsona (STB) dia ny fanamorana ny fananganana. Rehefa mandidy ny serivisy avy amin'ny mpamatsy anao ianao, misy installer iray tonga ao an-tranonao ary manao ny zavatra rehetra amin'ny fampifandraisana ny STB amin'ny fanatanterahana ny fitaovana ilaina amin'ny fitaovana misy anao. Ny fitaovana TiVo dia mamakivaky anao amin'ny zava-drehetra tokony hataonao mandritra ny fametrahana ary mora tahaka ny fananana teknolojia azo anaovana izany ho anao.
Antony iray hafa ny fandaniana. Ny DVR omen'ny orinasa tariby na satelita dia matetika tsy misy vidiny avoakany miaraka aminy. Manafatra tsotra izao ny saram-panananao amin'ny ampahan'ny volanao isam-bolana.
Mazava ho azy fa misy STB hafa eo amin'ny tsena toy ny TiVo sy Moxi. Tena samy hafa be amin'ny traikefa amin'ny mpampiasa izy ireny ary milefitra amin'ny birao eo ambony latabatra. Izany hoe, ny fampiasana azy ireo dia tena mitovy. Ny tariby dia mifandray amin'ny fitaovana izay mifandray amin'ny fitaovana hafa ao amin'ny trano fijerena teatra na fahitalavitra.
Amin'ny ankapobeny, ireo boaty fantsakana dia mora ampiasaina, mora vidy, miankina amin'ny orinasa, ary amin'ny ankapobeny dia afaka manome traikefa an-tserasera.
Raha toa ka toa ny mpaka sary DVD no iray amin'ireo fitaovana mora ampiasaina, dia mety ho sarotra be izany. Tsy vitan'ny manangana fotsiny fa na ny fividianana ny DVD mpamoaka horonantsary aza dia mety ho fanamby amin'ny antony maro.
DVD mpikirakira dia miasa toy ny VCR fa toy ny tapisage ampiasainao ho an'ny horonantsary. Ny rakitra dia noforonina an-tanana ary rehefa feno ny arsiva dia mila solosaina ianao na amin'ny rakitra averina indray, dia manoratra ny programa efa voarakitra.
Ny ankamaroan'ny mpamoaka horonantsary DVD dia misy hadisoana roa: tsy misy mpijery televiziona ary tsy misy torolàlana elektronika . Raha toa ny sasany manome ireo endri-javatra ireo, dia mahalana sy mihamafy hatrany izany.
Raha tsy misy famenoana dia tsy maintsy mampifandray ny rakitrao amin'ny fitaovana hafa ianao ary manome fomba iray ahafahana manova ny fahitalavitra ao amin'io fitaovana io.
Tsy manana torolàlana fanoratana anarana ianao fa tsy maintsy manamboatra fandraketana tsirairay. Ity dia mety ho mora ny manadino ary misy hatrany ny fotoana tsy ampy fandehanana; zavatra izay matetika dia tsy mitranga amin'ny DVR.
Ny tombony ho an'ny DVD mpaka sary dia ny vidiny. Ankoatra ny vidin'ny fividianana ny fitaovana, izay mahatratra hatramin'ny $ 120 ka hatramin'ny $ 300, ny vola fampiasanao vola dia kely indrindra indrindra raha mampiasa DVD-RW izay mety ampiasaina imbetsaka. Tsy misy saram-bola isam-bolana mifandraika amin'ny rakitra DVD.
Raha tsy mieritreritra ny asa fanampiny tafiditra amin'ny fandaharana ny fandaharam-potoanao ianao ary te-hamonjy amin'ny saram-bola isam-bolana na farafahakeliny avoakany ambony kokoa, ny DVD-recorder ho anao.
Raha mila fanaraha-maso lehibe momba ny traikefanao DVR ianao , dia azonao atao ny mijery pejin'ny teatra an-trano . Ny antsoina hoe HTPC dia matetika no antsoina hoe HTPC, izany dia ny dikan'ny anarana: solosaina mifandray amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny tanjon'ny fialam-boly.
Misy karazana rindrambaiko maromaro rehefa mitranga ny HTPC . Ny Microsoft Windows Media Center , SageTV sy MythTV dia telo amin'ireo malaza indrindra. Samy manana ny fandrosoany sy ny eritreriny izy ireo ary izay hofidinao dia miankina amin'ny zavatra ilainao.
Ny HTPCs dia manana tombony lehibe ho an'ny STB sy DVD mpamoaka sary amin'ny fomba fampiasa sy ny fampiasana azy. Izy ireo dia manome fahafahana miditra tsy amin'ny rafitra DVR afa-tsy amin'ny horonantsary voatahiry sy amin'ny Internet, mozika sy sary ary votoaty hafa azonao aseho amin'ny fahitalavitra.
Na izany aza anefa dia manana ny tsy fahombiazany izy ireo. Ny vidin'ny Upfront dia mety ho avo be amin'ny HTPC na dia tsy misy isa isam-bolana aza. Mety ho sarotra ny manangana sy mihazona ny HTPC mety. Misy ny fanoloran-tena vitsivitsy ilaina amin'ny fitantanana ny iray amin'ireny rafitra ireny, saingy ny valisoa dia mety ho manan-danja.
Amin'ny farany, ny karazana DVR izay nofidinao dia miankina amin'ny antony maromaro: fandaniana, fampiasana ary ny fikojakojana. Maro ireo safidy ary ny lanjan'ny tsirairay, raha sarotra, dia tsy azo atao. Na dia mety ho iray amin'ireo fanapahan-kevitra faran'izay kely indrindra aza ny fanapahan-kevitrao, ny DVR izay nofidianao dia ho lasa ivon'ny fialam-boly ataonao eo amin'ny fianakavianao. Ilaina ny maka fotoana handraisana rafitra izay hahafahanao mampiasa mandritra ny taona.
The Sound Bar Manarona: Fanamarihana
Ny 6 Best TV Capture Cards sy Video Capture Cards mba hividy amin'ny 2018
Alohan'ny hividiananao Subwoofer
Ny fahitalavitra 1080p
Ny fitaovana 9 tsara indrindra hividy amin'ny 2018 ho an'ny fandaharana TV
Torolalana ho an'ny Tontolon'ny TV Wall Mount Bracket
Sears Tatitra Fanao Alahady Mivembena Alahady
Fampitahana: Buying Online vs In A Store
Inona ny rakitra XML?
Ahoana ny fomba hanovana ny fanovana DNS Server ao amin'ny tranonkala Computer Network
Misy Vola Mahafa-po ve ny Mandany?
Ahoana no fanaovana pirinty ny sainao?
Oblivion Cheats - Alchemy Codes
Inona no atao hoe fifandraisana akaiky eo amin'ny saha?
Torolalana momba ny fametrahana ny rakitra ao amin'ny OS X Lion
Fomba hanamboarana lalao zazalahy kely: Manombohana amin'ny fanadiovana ny cartridge
Ahoana no ahitanao ny mombamomba ny mpampiasa mpampiasa (SID) amin'ny Windows
Top 8 Hidden Objects Games
BMX XXX Mamaky ny Gamecube
Ahoana no Mamorona Ringtones Free ao amin'ny iTunes
Ahoana no hizarana sy hiara-miasa amin'ny Google Drive
Tombontsoa avy amin'ny Video Conferencing
Ahoana no fomba handefasana hafatra mailaka amin'ny Windows Live Hotmail
Ampiasao ireto fampihetseham-po ho an'ny fampihetseham-peo maromaro ireto
Ny fampiasana sy ny tanjon'ny fiasan'ny 'Internet' amin'ny Internet
Resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanorina ny Omegle, Leif K-Brooks